Semalt विशेषज्ञ: अत्यधिक कुशल वेब सामग्री एक्सट्रक्टर
वेब सामग्री एक्स्ट्रक्टरले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नको लागि, तपाईंले वेब सामग्री के हो भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ। सरल सर्तमा, वेब सामग्री भनेको वेब पृष्ठमा तपाईले देख्नु भएको कुरा हो। यी छविहरू, अडियो फाईलहरू, भिडियोहरू र पाठ्यक्रमका पाठहरू हुन्। कहिलेकाँही, तपाईं सामग्री पछाडि आउन सक्नुहुन्छ जुन राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको छ र एक्स्ट्र्याक्ट गर्न सजिलो छ र कहिलेकाँही तपाइँले वेब पृष्ठ सामना गर्न सक्नुहुन्छ जुन सामग्रीलाई प्रतिलिपि गर्न र हातैले पेस्ट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। र प्राय: समस्या भनेको सामग्री आफैंमा होईन, तर वेब पृष्ठहरूको उच्च मात्रा तपाईले स्क्र्याप गर्नु पर्छ।
उदाहरण को लागी, के तपाई सोच्नुहुन्छ कि कोहीले मैन्युअल तरिकाले सयौं पृष्ठहरु बाट सामग्री प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ? के यदि यो दैनिक आधारमा गर्नु पर्छ भने? यो जहाँ वेब सामग्री एक्स्ट्रक्टर आउँछ। वेब सामग्री एक्सट्रक्टर एक सफ्टवेयर, उपकरण, कार्यक्रम, वा अनुप्रयोग हो जुन संरचित, अर्ध-संरचित, वा असम्बन्धित वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। वेब सामग्री एक्स्ट्रक्टर के हो परिभाषित गरिसकेपछि, यसलाई वेब साइट एक्स्ट्र्याक्शन के हो भनेर सरल सर्तहरूमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ।
संक्षेपमा, वेब डाटा एक्स्ट्र्यासन वेब पृष्ठहरू क्रोल गर्न र तिनीहरूबाट निर्दिष्ट डाटा निकाल्न उपकरण, सफ्टवेयर, वा स्क्रिप्ट प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। यस उपकरणलाई एक संरचित ढाँचामा स्क्र्याप्ड डाटा प्रस्तुत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ समस्या के हो भने केवल धेरै थोरै व्यक्तिहरूले वेब स्क्र्यापिंग प्रोग्राम विकास गर्न सक्दछन्। यो हो जुन वेबसंड्यू वेब डाटा एक्स्ट्रक्टरलाई जन्म दिईयो।
यो एक्स्ट्रक्टर एक धेरै छोटो समय अवधिको बीच बहु वेब पृष्ठहरुबाट बिभिन्न डाटा तत्व निकाल्न विकसित गरीएको थियो। WebSundew वेब सामग्री एक्सट्रैक्टरले वेब पृष्ठहरूको सबै प्रकारकोबाट डाटा स्क्र्याप गर्न सक्छ। यसैले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूले यसलाई ठूलो संख्यामा वेब पृष्ठहरूबाट नराम्रो ढ struct्गले संरचित डाटालाई स्क्र्याप गर्न प्रयोग गर्दछन्। होनि, यो यसको लचिलोपनका कारण उनीहरूको सेवा गर्दछ।
उपकरण निम्न क्षेत्रहरूमा प्रयोग भएको छ:
मानव संसाधन उद्योग
कर्मचारी भर्ना गर्ने संस्था
सूचना प्रविधि र सेवाहरू
कम्प्युटर र नेटवर्क सुरक्षा
रसद र आपूर्ति
यो सूची लामो प्राप्त गर्न जारी राख्नेछ किनकि उपकरण अत्यन्त कुशल, सही छ र कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। किनकि वेब डाटा निकाल्ने हरेक व्यवसायको अपरिहार्य हिस्सा भएको छ, वेब डाटा निकाल्ने उपकरणको महत्त्वलाई ठोकुवा गर्न सकिदैन।
यद्यपि यो उपकरण धेरै कुशल छ, यसको विकासकर्ताहरू अझै यसलाई अझ राम्रो बनाउन कोशिस गर्दै प्रयोगकर्ताहरूका फिडब्याकहरूको लागि खुला छन्। यद्यपि वेब एक्स्ट्र्यासनको लागि अन्य उपकरणहरू छन्, वेबसुन्डेउ वेब सामग्री एक्स्ट्रक्टर सबैभन्दा सही र छिटो हो। यसले केहि मिनेटमा सय भन्दा बढी वेब पृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न सक्छ। संक्षेप मा, उत्पादन को उपयोग गर्न को लागी धेरै सजिलो छ र यो पनि ग्राहक उन्मुख छ।